Baanka Aduunka oo Soomaaliya ugu deeqay $40 milyan oo loogu talagalay latacaalidda Ayaxa - Tilmaan Media
Baanka Aduunka oo Soomaaliya ugu deeqay $40 milyan oo loogu talagalay latacaalidda Ayaxa
in DHAQAALE, CAALAMKA
Guddiga Maamulka ee Baanka aduunka ayaa ansixiyay taageero dhaqaale oo 40 malyan oo dollar ah oo Soomaaliya lasiinayo. Taageeradaan oo qayb ka ah deeqda hormarinta caalamka (IDA) ayaa loo adeegsan doonaa wax ka qabashada dhibaatooyinka Ayaxu Soomaaliya ugastay.
Ayaxa ayaa saamayn ku yeeshay nolosha dad gaaraya 2.6 malyan oo kunool afartan iyo saddex degmo oo Soomaaliya katirsan. Beeraha oo ka ah %75 wax soo saarka dhaqaale ee Soomaaliya ayaa dhibka ugu badan kasoo gaaray Ayaxa.
Taageerada dhaqaale ayaa sida lagu sheegay warbixin lagu daabacay bogga Baanka Aduunka si gaar ah taageero cunno iyo lacag caddaan ah lagu siin doonaa dadka saboolka ah ee Ayaxu saameeyay
Baanka Aduunka ayaa bishii May ee aan soo dhaafnay ansixiyay lacag $500 malyan oo deeq dag-dag ah oo loogu talagalay dalalka Afrika iyo Bariga dhexe ee ku saamoobay duullaanka Ayaxa. dhibanayaasha ayaxa ayaa lasiinayaa lacag caddaan ah iyo taageero dhanka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha nool. Sidoo kale waxaa loo adeegsan doonaa xoojinta diyaargarowga dowladaha iyo sare u qaadidda iskaashiga ka dhaxeeya dalalka gobolka.
Mileteriga Shiinaha oo tallaal cusub oo koronafayras ah isticmaalkiisa billaabi doona
Madaxweynaha Farmaajo oo xariga kajaray garoonka ciyaaraha Muqdisho